Abadlali be-Orlando Pirate bathathe isinqumo sokuthola umjovo wabo wokuqala wokuvikela i-covid-19 | Scrolla Izindaba
Abadlali be-Orlando Pirate bathathe isinqumo sokuthola umjovo wabo wokuqala wokuvikela i-covid-19
Njengoba abantu abaningi bebubona ubungozi bokungagonywa, abadlali bebhola basebenzise leli thuba ukuthi nabo bagome.
NgoMgqibelo, abadlali abangama-30 kanye nabasebenzi abayisithupha be-Orlando Pirates bathole umjovo wabo wokuqala i-J&J Chris Baragwanath Hospital.
Abadlali abebefike esibhedlela bebebonakala bejabule; futhi bajabulela ukuthola umjovo.
USandile Gwayi, umphathi wezokuxhumana esifundeni sezempilo eGoli, uqinisekise i-Scrolla.Africa ukuthi abadlali beqembu abangama-36 bafike esibhedlela i-Baragwanath ukuze bathole umjovo we-J&J.
Le mijovo ilethwe uhlelo lweSisonke, uhulumeni aqale ukulwenza ekuqaleni kwalo nyaka.
Abadlali be-Orlando Pirates bathola umjovo wabo wokuqala wokugoma i-J&J ngesikhathi kusahlolwa umgomo ekuqaleni kwalo nyaka. Umgomo wokuqala wawuhloselwe abasebenzi bezempilo kanye nabanye abasebenzi abaphambili.
UGwayi wengeze ngokuthi lezi zinkunzi zase-Soweto zizobuya nelinye iqoqo labadlali nabasebenzi ekuqaleni konyaka ozayo.
Ucwaningo lweSisonke booster jab lwabasebenzi bezempilo lwethulwa ezindaweni ezikhethiwe zokugoma mhla ziyisishiyagalolunye kuLwezi ngonyaka wezi-2021.
Ukugonywa kwabadlali be-Orlando Pirates kwenzeke esikhathini esingaphansi kwamahora angama-48 ngemuva kokuthi abadlali abangama-31 be-Kaizer Chiefs bathole ukuthi bane-Covid-19.
NgoLwesithathu ekuseni, i-Kaizer Chiefs ithe abadlali abangama-31 eqenjini bathole ukuthi bane-Covid-19. Lokhu kuholele ekutheni kuvalwe i-Kaizer Chiefs Village e-Naturena kuleli sonto.
Amakhosi athi ngenxa yalokho akukho abangakwenza, futhi lokhu bazokuthatha njengesimo esiphoqayo.
NgoLwesihlanu i-Premier Soccer League (i-PSL) ibize umhlangano ophuthumayo wokudingida udaba lomthelela we-Covid-19 kubadlali.